संसारको सबैभन्दा सानो गाई - पत्याउनु हुन्छ? - साप्ताहिक
संसारको सबैभन्दा सानो गाई कत्रो होला ? हाम्रो सोचमा कुकुरजत्रो वा केही ठूलो ? तर अमेरिकाको मिसीसिपीमा संसारकै सबैभन्दा सानो गाईको बाच्छी फेला परेको छ ।
उक्त बाच्छीको तौल जम्मा साढे ४ किलो छ । अहिले त्यो गाईलाई मिसिसिपी स्टेट युनिभर्सिटी कलेज अफ भेटनरीमा राखिएको छ । गाईको मालिकले पहिले उक्त गाईको वजन निकै कम भएको देखेपछि उपचारका लागि भेटनरी पुर्‍याएका थिए ।
भेटनरीमा सामान्य जाँच गर्दा गाई स्वस्थ तन्दुरुस्त भेटिएपछि उक्त गाईको जीनसम्बन्धी अध्ययन थालिएको छ । उक्त गाईलाई भेटनरीका कर्मचारीहरूले लिटिल बिल नाम दिएका छन् ।
प्रकाशित :माघ १४, २०७५
सबैभन्दा लोकप्रिय को ?
हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो हिट शिल्ड
हङकङमा नेचर गाई
सानो मनको रानू कम्बर
मानिसको छालाबाट बनेको कोट कार्तिक १३, २०७५
मानिसको छालाको कभर कार्तिक १०, २०७५